विवाह पञ्चमीको भाका खेर गयो, कहिले चल्छ नेपाली रेल ? - ParyatanBazar.com
विवाह पञ्चमीको भाका खेर गयो, कहिले चल्छ नेपाली रेल ?
मंसिर २६ , जनकपुरधाम । नेपालको आफ्नै रेल आइपुग्दा २ असोजमा जनकपुरमा खुसीयाली छायो । भारतबाट आएको रेल हेर्न मात्र सयौं मानिस रेल्वे स्टेसन पुगेका थिए ।
रेल आएको तीन महिना पुग्न लाग्यो । तर, अहिलेसम्म यात्रु सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल रेल्वे विभागका अधिकारीहरुले दिएको विवाह पञ्चमीको भाका पनि रेल सञ्चालनमा नआउने भएको छ ।
यो वर्ष विवाह पञ्चमी पुस ४ गते परेको छ । तर विवाह पञ्चमीका दिनबाट रेल सञ्चालन गर्न नसकिने रेल विभागका महानिर्देशक गुरुप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘हाम्रो योजना त त्यही थियो । तर, यो मितिमा रेल गुडाउन सकिएन,’ उनले भने ।
रेल विभागले नयाँ भाका राखेको छ, पुस मसान्त । ‘विवाह पञ्चमीमा सुरु हुन नसके पनि पुस मसान्तभित्र रेल गुडाउँछौं,’ महानिर्देशक भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।
८३ करोड ९३ लाख ६० हजार (भन्सार शुल्क बाहेक) मा खरिद गरी ल्याइएको १६०० एचपी डेमुको दुई वटा रेल अहिले धनुषाको इनर्वामा पार्किङ्ग गरेर राखिएको छ । रेलको सुरक्षाका निम्ति सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको छ ।
यो रेल भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर, सीतापुर भंगहा हुँदै बर्दिवाससम्म सञ्चालन गर्ने योजना छ । पहिलो चरणमा लिक बनेको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
पुस मसान्तमा पनि सञ्चालन गर्न गाह्रो
रेल नेपाल आएपछि नेपाल रेल्वे कम्पनीले ६ महिने करारमा विभिन्न पदमा १२९ जना कर्मचारी राख्न विज्ञापन गरेको थियो । झण्डै ३२ हजारले आवेदन पनि दिएका छन् ।
तर रेल कम्पनीले निकालेको विज्ञापन नै रद्द गरेर लोकसेवाले अर्को विज्ञापन निकाल्ने तयारी छ । आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार केही दिनमा कर्मचारी माग हुन्छ र, विज्ञापन प्रकाशित गरेर भर्ना प्रकृयामा जाँदा कम्तीमा २ महिना लाग्छ ।
रेल सञ्चालनमा नआउँदै रेल्वे ट्रयाकबाट झण्डै १८ हजार क्लीप चोरी भइसकेको छ । एउटा क्लीपमा एक किलो फलाम हुन्छ । ‘बन्दाबन्दीको समयमा क्लिपहरु चोरी भएको छ,’ रेल विभागका साइट इन्चार्ज विनोद ओझाले भने, ‘रेल आएपछि हामीले अनुगमन गर्दा क्लिपहरु चोरी भएको पाइएको हो ।’
रेलको ट्रयाक बनाउने जिम्मेवारी भारत सरकारको भएकाले उसैले क्लीप जोडेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
कर्मचारीको अभाव र क्लिप चोरी मात्र होइन, रेल्वे सञ्चालनका लागि कानुनको समेत अभाव छ ।
कानूनी अभाव पूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताए । ‘अध्यादेशको मस्यौदा तयार भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘चाँडै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिनेछ ।’
नेपालले मात्र कानुन बनाएर हुँदैन, भारलले पनि बनाउनुपर्छ । यसका लागि कुराकानी भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘यसपछि दुवै देशबीच रेल संचालन गर्ने सम्झौता हुन्छ ।’